600Lbs Ndị na -emepụta ihe na ndị na -eweta mkpọchi magnetik ọnụ ụzọ otu - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Mkpọchi Magnetik > Mkpọchi Magnetic 600Lbs > Mkpọchi Magnetik nke 600Lbs
Ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ na -amị amị na ọnụ ụzọ igwe nwere ike idozi ya n'otu mkpọchi ndọta. 600lbs bụ ike na -ejide. Aluminium bụ isi ihe. Ezubere ihe ndọta pụrụ iche na-eme ka njikwa njikwa akpaaka dị nchebe yana mkpọchi eletrik na-adịte aka.
Tags na-ekpo ọkụ: Mkpọchi ọnụ ụlọ Magnetik 600Lbs, ndị na -emepụta ihe, ndị na -ebubata ya, ụlọ ọrụ, ahaziri ya, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ego, zụta ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa, nkwupụta, CE, ISO9001, Ogo